ကမ်ဘာမွကွေီးကို ခဈြမွတျနိုးတတျစဖေို့ ကလေးတှကေို သငျကွားပေးသငျ့တဲ့ အခကျြ(၈)ခု - Chit MayMay
Home Child Teaching ကမ်ဘာမွကွေီးကို ခဈြမွတျနိုးတတျစဖေို့ ကလေးတှကေို သငျကွားပေးသငျ့တဲ့ အခကျြ(၈)ခု
ကမ်ဘာမွကွေီးကို ခဈြမွတျနိုးတတျစဖေို့ ကလေးတှကေို သငျကွားပေးသငျ့တဲ့ အခကျြ(၈)ခု
ကလေးဆိုတာ အလအေ့အကငျြ့တှကေို မွနျမွနျသငျလှယျ၊ တတျလှယျကွပါတယျ။ မိဘတှအေနနေဲ့ သူတို့လေးတှကေို သဘာဝပတျဝနျးကငျြနှငျ့ သဟဇာတဖွဈတဲ့ အလအေ့ထလေးတှေ သငျပေးရငျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိနျးသိမျးရာမှာ ကွီးမားတဲ့ အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကလေးတှကေို သဘာဝနှငျ့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျသှယျမှု ရှိစနေိုငျဖို့နှငျ့ ကမ်ဘာမွကွေီးကို ကယျတငျခွငျးနှငျ့ ပတျသတျတဲ့ ပွောဆိုမှုတှေ သှကျလကျတတျကွှစှာ ပွုလုပျနိုငျဖို့ ထိုအလအေ့ထလေးတှေ တညျဆောကျခွငျးဟာ မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ စိနျချေါမှုတှကေို ပိုမိုသတိပွုမိစမှော ဖွဈပွီး အနာဂတျမှာ ၎င်းငျးတို့ကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို ဆှေးနှေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကမ်ဘာမွကွေီးကို ကယျတငျဖို့ နညျးလမျးတှနှေငျ့ ပတျသတျပွီး ကလေးတှကေို သငျကွားပေးနိုငျတဲ့ အခကျြအနညျးငယျကို မြှဝခေငျြပါတယျ။
၁။ မျောတျောယာဉျတှဟော ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးလာမှုရဲ့ ကွီးမားသော အကွောငျးတရားမြားဖွဈပွီး ဓါတျငှေ့ ထုတျလှတျမှု အားလုံးရဲ့ ၅ပုံ ၁ပုံရှိတယျဆိုတာ ကလေးတှကေို သငျကွားပေးနိုငျပါတယျ။ သူတို့က ဒီအခကျြအလကျတှကေို မှတျထားပွီး သူတို့ရဲ့ အနာဂတျမှာ ကားဝယျယူမှုနှငျ့ ပတျသတျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှအေတှကျ အသုံးခနြိုငျပါတယျ။ မျောတျောကားတှေ လြော့ဝယျခွငျးဖွငျ့ ကမ်ဘာမွကွေီးကို ကောငျးကောငျး ဂရုစိုကျပေးနိုငျတယျဆိုတာ သငျပေးထားရပါမယျ။
လူတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ မျောတျောကားအရအေတှကျကို အနိမျ့ဆုံး လြှော့ခခြွငျးဟာ လထေုညဈညမျးမှုကို ဖွဈစတေဲ့အပွငျ ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးလာမှုကို ဖွဈစသေော ကာဗှနျဓါတျငှေ့ ထုတျလှတျမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လြှပျစဈကားတှနေဲ့ လောငျစာဆီသုံးကားတှေ အသုံးပွုခွငျးဟာ ဇီးရိုး emissions ဖွဈတာကွောငျ့ စှမျးအငျကို ပွနျလညျ မွှငျ့တငျနိုငျတယျဆိုတာ ကလေးတှေ သိထားသငျ့ပါတယျ။
၂။ ရကေို ခြှတောခွငျးဖွငျ့ ရထေိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျခွငျးရဲ့ အရေးကွီးမှုကို သငျပေးပါ။ ရပေိုကျခေါငျးတှကေို ပိတျထားခွငျး၊ လိုအပျတဲ့ ရပေမဏကိုသာ သုံးစှဲခွငျးနှငျ့ မိုးရေ စုဆောငျး ထိနျးသိမျးခွငျးတို့ဖွငျ့ ပွုလုပျနိုငျကွောငျး ကလေးတှကေို သငျပေးရပါမယျ။
၃။ တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျအပါအဝငျ သကျရှိသတ်တဝါတှအေားလုံးကို ဂရုစိုကျသငျ့ကွောငျး ကလေးတှကေို သငျကွားပေးသငျ့ပါတယျ၊ ဂဟေစနဈ မြှတစဖေို့ ၎င်းငျးတို့ကို အစားအစာနှငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပေးခွငျးဖွငျ့ ဂရုစိုကျပေးသငျ့ပါတယျ။ တိရိစ်ဆာနျအခငျြးခငျြး တိုကျခိုငျးတဲ့ ဖြျောဖွပှေဲတှေ၊ တိရစ်ဆာနျဆပျကပျလို ဖြျောဖွပှေဲတှကေို ရှောငျကွဉျခွငျးဖွငျ့ ကမ်ဘာမွကွေီးရှိ တိရိစ်ဆာနျမြားကို ကူညီနိုငျကွောငျး သငျပေးလို့ရပါတယျ။
၄။ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာ ပကျြစီးယိုယှငျးသှားတဲ့ ပစ်စညျးမဟုတျတာကွောငျ့ ကလေးတှကေို ပလပျစတဈပုလငျးတှနှေငျ့ ကျောဘူးတှကေို ပွနျလညျ အသုံးပွုဖို့ အားပေးသငျ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာမွကွေီးနှငျ့ ပငျလယျသတ်တဝါတှကေို ထိခိုကျစတေဲ့ ပလတျစတဈ စှနျ့ပဈပစ်စညျး ညဈညမျးမှုတှကေို ကာကှယျဖို့ သငျပေးခွငျးဟာ ကမ်ဘာမွကွေီးကို ခဈြမွတျနိုးတတျစဖေို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
၅။ အျောဂဲနဈအစားအစာတှေ ထုတျလုပျခွငျးဟာ မွဆေီလှာကို ထိခိုကျစတေဲ့ ဓါတျမွသွေဇာနှငျ့ ပိုးသတျဆေးတှကေို မသုံးတာကွောငျ့ သမားရိုးကြ စိုကျပြိုးရေးနညျးလမျးမြားထကျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ပိုကောငျးစပေါတယျ။ ထုတျလုပျတဲ့ အစားတှကေလညျး ပိုကနျြးမာပွီး အာဟာရ ပိုပွညျ့ဝပါတယျ။ အမှိုကျမြားတဲ့ အသငျ့စား အစားအစာတှေ စားမယျ့အစား သဈသီးတှကေို သရစောအဖွဈ စားခွငျး၊ အဆီနညျးတဲ့ အစားအစာမြားကို စားခွငျးနှငျ့ ပေါငျမုနျ့နှငျ့ အိမျလုပျမုနျ့တှကေို စားခွငျးက သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ကာကှယျဖို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးဖွဈကွောငျး သငျပေးရပါမယျ။
၆။ သဈပငျတှကေ အနာဂတျဖွဈပါတယျ။ သဈပငျတှကေို တနျဖိုးထားပွီး ကာကှယျတတျဖို့ ကလေးတှကေို သငျပေးထား သငျ့ပါတယျ။ အပငျစိုကျပြိုးခွငျးကို ယဉျကြေးမှုတဈခုအဖွဈ ဖနျတီးတာဟာ ကြှနျတျာတို့ရဲ့ ဂဟေစနဈအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ။
ပွောငျး၊ ဖရုံသီး၊ ခရမျးခဉျြသီးနှငျ့ စတျောဘယျရီလို အပငျလေးတှေ စိုကျပါ။ လိပျပွာတှေ၊ ပစြားပိုး နှငျ့ တခွားစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးသော အငျးဆကျတှကေို ဆှဲဆောငျသော ပနျးပငျလေးတှေ စိုကျပြိုးပါ။ သားသားမီးမီးတှကေို ရုက်ခဗဒေ ဥယြာဉျလို၊ ပနျးခွံလို နရောမြိုးကို ချေါသှားပေးပါ။
၇။ ဘယျအသကျအရှယျမှာပဲဖွဈဖွဈ ကလေးတှကေို သဘာဝ သယံဇာတ ရငျးမွဈတှကေို ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလဲ ဆိုတာ နားလညျစဖေို့ သငျပေးရပါမယျ။ ခရီးထှကျခွငျးနှငျ့ ကမျးခွမှော လမျးလြှောကျခွငျးကဲ့သို့သော ပွငျပကမ်ဘာကို လလေ့ာခွငျးဖွငျ့ စှမျးအငျခြှတောဖို့ သငျပေးသငျ့ပါတယျ။ အသုံးပွုပွီးပါက မီးတှကေို ပိတျထားခွငျးဟာ လြှပျစဈဓါတျအားနှငျ့ စှမျးအငျကို ဘယျလိုခြှတောနိုငျကွောငျး ငယျစဉျကတညျးက ကလေးတှကေို သငျကွားပေးထားရပါမယျ။
၈။ အမှိုကျကောကျခွငျးဖွငျ့ ပတျဝနျးကငျြ သနျ့ရှငျးရေးနတှေ့မှော ကလေးတှကေို ပါဝငျစခွေငျးဟာ ကမ်ဘာမွကွေီးကို ခဈြမွတျနိုးတတျလာစပွေီး အခွားသူတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ ဆကျသှယျမှု ကောငျးလာစပေါတယျ။
ဒီအရာတှကေ ကလေးတှကေို သငျကွားပေးဖို့ လိုအပျတယျ၊ အရေးကွီးတယျလို့ သငျထငျပါသလား? မှတျခကျြလေးတှေ မြှဝပေေးသှားပါဦးနျော။
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်စေဖို့ ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ အချက်(၈)ခု
ကလေးဆိုတာ အလေ့အအကျင့်တွေကို မြန်မြန်သင်လွယ်၊ တတ်လွယ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့လေးတွေကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်တဲ့ အလေ့အထလေးတွေ သင်ပေးရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ကြီးမားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို သဘာဝနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်မှု ရှိစေနိုင်ဖို့နှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ သွက်လက်တတ်ကြွစွာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ထိုအလေ့အထလေးတွေ တည်ဆောက်ခြင်းဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ပိုမိုသတိပြုမိစေမှာ ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ အချက်အနည်းငယ်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ မော်တော်ယာဉ်တွေဟာ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုရဲ့ ကြီးမားသော အကြောင်းတရားများဖြစ်ပြီး ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု အားလုံးရဲ့ ၅ပုံ ၁ပုံရှိတယ်ဆိုတာ ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဒီအချက်အလက်တွေကို မှတ်ထားပြီး သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်မှာ ကားဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ကားတွေ လျော့ဝယ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကောင်းကောင်း ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်ပေးထားရပါမယ်။
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ မော်တော်ကားအရေအတွက်ကို အနိမ့်ဆုံး လျှော့ချခြင်းဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေတဲ့အပြင် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကို ဖြစ်စေသော ကာဗွန်ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လျှပ်စစ်ကားတွေနဲ့ လောင်စာဆီသုံးကားတွေ အသုံးပြုခြင်းဟာ ဇီးရိုး emissions ဖြစ်တာကြောင့် စွမ်းအင်ကို ပြန်လည် မြှင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။
၂။ ရေကို ချွေတာခြင်းဖြင့် ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းရဲ့ အရေးကြီးမှုကို သင်ပေးပါ။ ရေပိုက်ခေါင်းတွေကို ပိတ်ထားခြင်း၊ လိုအပ်တဲ့ ရေပမဏကိုသာ သုံးစွဲခြင်းနှင့် မိုးရေ စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ကလေးတွေကို သင်ပေးရပါမယ်။
၃။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အပါအဝင် သက်ရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးကို ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်၊ ဂေဟစနစ် မျှတစေဖို့ ၎င်းတို့ကို အစားအစာနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးခြင်းဖြင့် ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း တိုက်ခိုင်းတဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ တိရစ္ဆာန်ဆပ်ကပ်လို ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးရှိ တိရိစ္ဆာန်များကို ကူညီနိုင်ကြောင်း သင်ပေးလို့ရပါတယ်။
၄။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားတဲ့ ပစ္စည်းမဟုတ်တာကြောင့် ကလေးတွေကို ပလပ်စတစ်ပုလင်းတွေနှင့် ကော်ဘူးတွေကို ပြန်လည် အသုံးပြုဖို့ အားပေးသင့်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် ပင်လယ်သတ္တဝါတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ညစ်ညမ်းမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ သင်ပေးခြင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အော်ဂဲနစ်အစားအစာတွေ ထုတ်လုပ်ခြင်းဟာ မြေဆီလွှာကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဓါတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးတွေကို မသုံးတာကြောင့် သမားရိုးကျ စိုက်ပျိုးရေးနည်းလမ်းများထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ အစားတွေကလည်း ပိုကျန်းမာပြီး အာဟာရ ပိုပြည့်ဝပါတယ်။ အမှိုက်များတဲ့ အသင့်စား အစားအစာတွေ စားမယ့်အစား သစ်သီးတွေကို သရေစာအဖြစ် စားခြင်း၊ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာများကို စားခြင်းနှင့် ပေါင်မုန့်နှင့် အိမ်လုပ်မုန့်တွေကို စားခြင်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သင်ပေးရပါမယ်။
၆။ သစ်ပင်တွေက အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကို တန်ဖိုးထားပြီး ကာကွယ်တတ်ဖို့ ကလေးတွေကို သင်ပေးထား သင့်ပါတယ်။ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကို ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးတာဟာ ကျွန်တ်ာတို့ရဲ့ ဂေဟစနစ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
ပြောင်း၊ ဖရုံသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် စတော်ဘယ်ရီလို အပင်လေးတွေ စိုက်ပါ။ လိပ်ပြာတွေ၊ ပျစားပိုး နှင့် တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသော အင်းဆက်တွေကို ဆွဲဆောင်သော ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးပါ။ သားသားမီးမီးတွေကို ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်လို၊ ပန်းခြံလို နေရာမျိုးကို ခေါ်သွားပေးပါ။
၇။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေကို သဘာဝ သယံဇာတ ရင်းမြစ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ ဆိုတာ နားလည်စေဖို့ သင်ပေးရပါမယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းနှင့် ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်ပကမ္ဘာကို လေ့လာခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ချွေတာဖို့ သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးပါက မီးတွေကို ပိတ်ထားခြင်းဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုချွေတာနိုင်ကြောင်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးထားရပါမယ်။
၈။ အမှိုက်ကောက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနေ့တွေမှာ ကလေးတွေကို ပါဝင်စေခြင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်လာစေပြီး အခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ကောင်းလာစေပါတယ်။
ဒီအရာတွေက ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အရေးကြီးတယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား? မှတ်ချက်လေးတွေ မျှဝေပေးသွားပါဦးနော်။
ကလေးငယျတှေ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိစရေနျနဲ့ တနျဖိုးထားတတျစဖေို့ နညျးလမျးမြား
အသကျ (၆)လအရှယျ ကလေးတှအေတှကျ ဂိမျးနှငျ့ လှုပျရှားမှုမြား